Fampiharana Android dimy hiarovana ny fiainanao manokana | Androidsis
Ny tsiambaratelo dia zavatra manan-danja tokoa ary izay dia miha-mifandray hatrany.. Indrindra aorian'ny scandals toa ilay niaina tamin'ny Facebook sy Cambridge Analytica. Antony mahatonga ny mpampiasa Android maro mitady hampiasa fampiharana izay manampy azy ireo hiaro ny fiainany manokana. Ny vaovao tsara dia ny fisian'ny fampiharana marobe izay miasa amin'io lafiny io.
Noho izany, etsy ambany izahay dia hamela anao lisitra miaraka aminao ny fampiharana Android tsara indrindra natokana hiarovana ny tsiambaratelo an'ny mpampiasa. Fampiharana izay hahasoa antsika ary tsy hatokana hitehirizana na hivarotra ny angon-tsainay.
Noho izany dia afaka manatanteraka hetsika isan-karazany amin'ny fampiasana azy ireo isika nefa tsy manahy fa hampiasaina tsy misy alalana na ho an'ny tanjona tsy fantatra ny angon-drakitra ary tsy manohana anay foana izy ireo. Ireo no rindranasa niditra tao anaty lisitra:
1 DuckDuckGo Browser tsiambaratelo
2 GlassWire: fampiasana data
5 Hidin-trano: AppLock
DuckDuckGo Browser tsiambaratelo
Manomboka amin'ny navigateur izay mety mahazatra ny ankamaroanao no resahina, ary izany dia mahazo be eo amin'ny tsena. Io no tranokala tsara indrindra azontsika ampiasaina amin'ny resaka fiainana manokana. Satria manakana ny mpanara-maso ireo pejy izy, manome tombana amin'ny politika momba ny tsiambaratelo momba ny pejin-tranonkala iray ary mampiasa fifandraisana voahidy isaky ny azo atao. Tsara ny famolavolana ary mora be ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Na dia mbola tsy manana asa betsaka tahaka ny mpizaha tany hafa aza izany dia maharitra fotoana. Fa azo antoka fa ho ampiana rehefa mandeha ny fotoana.
GlassWire: fampiasana data
Faharoa, hitanay ity rindranasa ity izay manao asa roa indrindra. Amin'ny lafiny iray, dia natokana hanaraha-maso ny fampiasantsika ny angon-drakitra, indrindra indrindra raha manana drafitra angon-drakitra misy fetra izahay amin'ny faran'ny volana. Amin'izay isika tsy mandany vola be. Fa ankoatr'izay, afaka jerentsika hoe iza amin'ireo rindranasa no mampiasa ny angon-tsika amin'ny tena izy. Azontsika atao ny mahita rehefa mifandray amin'ny mpizara finday ny iray. Ka fomba tsara hanamarinana ireo fitsikilovana na fampiharana ratsy io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia manana fividianana ao anatiny aza isika.
Nanjary zava-dehibe ho an'ny mpampiasa maro ny VPN. Ny isan'ny safidy amin'ity lafiny ity dia nitombo betsaka, na dia misy anarana sasany misongadina ambonin'ny ambiny aza. Izany no an'i Proton. Tsy mila mamorona kaonty hampiasana azy isika ary hankafy ny tombony azo avy amin'izany. Ankoatr'izay dia mampiasa encryption amin'ny fotoana rehetra izy ary mangarahara tanteraka. Ka io no iray amin'ireo safidy feno indrindra amin'ity lafiny ity, tsy mila mandoa vola amin'ny zavatra iray.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy manana fividianana na dokam-barotra izahay ao anatiny.
ProtonVPN (lany andro) - Jereo ny rohy fampiharana eto ambany
Fampiharana hafatra dia fantatra amin'ny fomba itaintainany ny angona mpampiasa. Na dia natsangana hatrany aza ny Telegram ny safidy azo antoka indrindra ary izay miaro ny tsiambaratelon'ny mpanjifa. Zavatra mazava amin'ny olan'izy ireo any Russia ankehitriny. Fampiharana mahasoa izay manatsara hatrany sy miaro ny fiainantsika manokana mandritra ny fifandraisantsika amin'ireo namantsika.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android ary tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Hofaranantsika ity lisitra ity izay natokana ho an'ny araraoty ny fisoratana anarana tsy nahazoana alàlana hanana fisian-telefaona. Hosakananao tsy hiditra amin'ilay fitaovana amin'ny fotoana rehetra izy ireo. Na dia mety misy fotoana sasany aza mahavita mandalo, saingy sarotra ny mitranga. Izy io dia fampiharana izay mandeha tsara ary miavaka satria mora ampiasaina amin'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra. Ka fantatsika izay ataon'ny rindranasa ary afaka miaro ny fitaovantsika sy ny angon-drakitra mandrakariva isika.
AppLock - Fingerprint (Lock)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana Android tsara indrindra hiarovana ny fiainanao manokana
Ny lalao mahafinaritra indrindra ho an'ny Android